Kyaw Win - Young Democracy and Strong Storm Ahead
on June 15, 2012 Related - Op-Ed
ဒီမိုကရေစီက နုနု မုန်တိုင်းကထန်ထန်
ကျော်ဝင်း။ ဇွန် ၁၅၊ ၂၀၁၂
မြန်မာ့နွေဦး အခါလည်ကျော်လာသည်နှင့် ဘေးမှရပ်ကြည့်နေမြဲ စာရေးသူမှာ၊ ရင်မ နေရတော့သည်။ ဤအခိုက်မှာပင်၊ ဘယ်(လ)ဂျီယံနိုင်ငံ၊ ဘရပ်ဆဲ(လ) အခြေစိုက် ‘International Crisis Group’ ၏ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီ ၁၁ ရက်နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သော ‘Reform in Myanmar: One Year On’ အမည်ရှိ စာတမ်းကို ဖတ်လိုက်ရရာ၊ ပို၍ပင် ဂရုဓမ္မထား စောင့်ကြည့်နေမိသည်။
အဆိုပါစာတမ်းက၊ မြန်မာ့ဒီမိုကရက်တိုင်ဇေးရှင်း၏ အံ့ဖွယ်အောင်မြင်မှုများကို မီးမောင်းထိုးပြထားသလို၊ ဖြစ်တန်ရာစိန်ခေါ်ချက်များကိုလည်း ဖော်ထုတ်သတိပေးထားသည်။ ဆိုခဲ့ပါစိန်ခေါ်ချက်များထဲမှ တစ်ခုမှာ - ယခုလို … ၊
“ အပြောင်းအလဲများကြောင့်၊ လူထု၏မျှော်လင့်ချက်များမြင့်မားလာချိန်၊ ကာလတာရှည် ရှိနေခဲ့သော ထိန်းချုပ်မှုများလည်း လျော့ပါးလာချိန် …၊ ဤကဲ့သို့သော အခြေအနေ အချိန်အခါမျိုးတွင် မတည်ငြိမ်မှုများထွက်ပေါ်လာနိုင်စရာ အလားအလာရှိပေသည် …။” - စသဖြင့်။
အားလုံးသိကြသည့်အတိုင်း၊ အလုပ်သမားများ၏ သဘာဝကျသောလိုလားတောင်းဆိုမှုများ၊ မြို့ပြလူထု၏ဖရောင်းတိုင်မီးကိုင် ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုများ၊ ကျောင်းသားလူငယ်များ၏ အနှစ်နှစ်အလလ မပြည့်ဝခဲ့သော ချဉ်ခြင်း …၊ စသည် စသည်များကို ဆက်တိုက်ဆိုသလို ကြားနေ မြင်နေရရာ၊ အရာအားလုံးကို စာနာနားလည်နိုင်သော်လည်း၊ စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ရသည်များကိုမူ မတားဆီးနိုင်။
နိုင်ငံတကာ အတွေ့အကြုံများအရ၊ နုနယ်သောဒီမိုကရေစီ၏ ကတိမ်းကပါးဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချင့်တွက်ပြီး၊ ဘုရားတနေရတော့သည်။
သို့နှင့်တိုင် စာရေးသူ စိုးရိမ်သလိုကားမဖြစ်ခဲ့ပါ။ အခါလည်စကလေးငယ်မျှသာ ရှိသေးသော မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီမှာ ဆိုခဲ့ပါ စိန်ခေါ်ချက်များကို အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် လှလှပပ ဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဤအတွက် ဒီမိုကရက်တစ် စိတ်ရှည်သည်းခံမှုကို လက်တွေ့ပြသခဲ့ကြသော၊ အစိုးရရော လူထုကိုပါ ချီးကျူး ကျေးဇူးတင်မိသည်။
ဤသို့သက်မချလို့မှ မဆုံးတတ်သေးမီမှာပင်၊ နောက်ထပ်စိန်ခေါ်ချက်ကြီးတစ်ခုနှင့် ရင်ဆိုင်လိုက်ရပြန်သည်။ ယခုတစ်ကြိမ်တွင်ကား၊ ယခင်ကလိုမဟုတ်လေတော့။ ဒီမိုကရက်တစ် စည်းဘောင်များကို ကျော်ကာ၊ အကြမ်းဖက်အသွင်အဖြစ် ဦးတည်လာသည်။ သာမန်တိုးမိတိုက်မိသည့် ဝိရောဓိလေးများကပင်၊ မပြီးနိုင်၊ မစီးနိုင်၊ ပြေချိန်တန်လို့မှ မပြေနိုင်ဖြစ်လာရာ၊ ဆက်စပ်စဉ်းစားစရာတွေ မနည်းမနောရှိလာတော့သည်။
ဤကိစ္စမှာ သမိုင်းနှင့်ဆိုင်သလို၊ လက်ရှိနိုင်ငံတကာအခင်းအကျင်းနှင့်လည်း ဆက်စပ်နိုင်သည်ဖြစ်ရာ၊ မြန်မာ့ဇာတ်ပွဲတစ်ပွဲမှ သံဆန်းတစ်ပိုဒ်လို၊ “ မပြေးသော် ကန်ရာရှိနေ၍၊ ဒွေးနှစ်ဖော် သံဝါညှိ” ကြသည်မျိုးပင် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လေမည်လား စဉ်းစားဖို့ရှိလာသည်။
အကယ်၍များ၊ ညီနှောင်သားချင်း-ချင်း အကြေအလည်ညှိကြရမည့် ဒီမိုကရက်တိုက်ဇေးရှင်းထက် ကျော်ပြီး၊ အမျိုးသားရေးပြဿနာ ဖြစ်လာမည်ဆိုလျှင်၊ ခါတိုင်းလို ဘေးမှရပ်ကြည့်မနေနိုင်တော့ပါ။ နိုင်ငံသားတစ်ဦး၏ အထူးစိုးရိမ်သောက- ဟု ဆိုရတော့မည်ဖြစ်ပါသည်။
နာမည်ကျော် အနာဂတ္တိဆရာ၊ ဂျော့ဖရီးမင်းက၊ သူ၏အရောင်းသွက်စာအုပ် ‘ The Next 100 Years ’ စာအုပ်တွင်၊ ၂၁ ရာစုအတွင်း၊ ပေါက်ကွဲလျှံကျလာနိုင်စရာရှိသည့် ‘ ပထဝီနိုင်ငံရေး အန္တရာယ်လမ်းကြောင်းများ ’ (geopolitical fault lines) များကိုရေတွက်ပြရာ၊ ‘ ထိစပ်နယ်မြေများ ’ ( borderlands ) အကြောင်းကို အထူးအန္တရာယ်တစ်ခုအဖြစ် ဖော်ပြထားပါသည်။
ထိစပ်နယ်မြေ - ဆိုသည်မှာ သာမန် နယ်စပ်ဒေသ ( frontier ) နှင့်မတူပါ။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံနှစ်ခု၏ ဆက်စပ်နယ်မြေဖြစ်သည့်တိုင်၊ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှု၊ အကြိမ်ကြိမ် အပြောင်းအလဲရှိသည့် ဒေသမျိုးကိုဆိုလိုသည်။ ဤဒေသမျိုးတွင် ထွေပြားသော ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံရှိနေတတ်သလို၊ သစ္စာခံမှုအမျိုးမျိုးလည်း ရှိနေတတ်ရာ၊ မတည်ငြိမ်မှု၏ ရေခံမြေခံများ အပြည့်ရှိနေသည်ဟု ဆိုပါသည်။
ရှုပ်ထွေးသော နိုင်ငံတကာဆက်စပ်အခြေအနေနှင့် ဆုံမိကြုံမိလျင်၊ ဤဒေသမျိုးရှိ သာမန်၊ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းများသည်ပင် ဆိုးဆိုးဝါးဝါးအခြေအနေထိ ဦးတည်သွားတတ်သည်- ဟုဆိုခဲ့ပါ အနာဂတ္တိဆရာက သတိပေးထားသည်။
ဥပမာ- ပြင်သစ်နှင့် ဂျာမဏီကြားမှ အဲ(လ)ဆက်နှင့်လော်ရိန်း၊ အန္ဒိယနှင့် ပါကစ္စတန်ကြားမှ ကက်ရှမီးယား၊ ဆားဗီးယားနှင့် အယ်(လ)ဘေးနီးယားကြားမှ ကိုဆိုဗို- စသည်တို့ဖြစ်သည်။ လက်ရှိ မက္ကစီကိုနှင့် အမေရိကန်နယ်စပ်မှာလည်း အလားတူ အန္တရာယ်ထိစပ်နယ်မြေ ဟုထောက်ပြပါသည်။
ယနေ့ပြဿနာကြုံနေရသော၊ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်းတောဒေသမှာ၊ ဤလိုနယ်မြေမျိုးဖြစ်သည်။ ဤသို့ဖြစ်ရသည်မှာလည်း ကိုလိုနီစနစ်၏ အမွေဆိုးဟုဆိုရပါလိမ့်မည်။
ပြောရလျှင် ဇာတ်၏အစမှာ၊ ၁၈၂၄ ခုနှစ် အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ပထမစစ်ပွဲပင်ဖြစ်သည်။ ဤစစ်ပွဲအပြီးမှာပင် ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံး၊ အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီဖြစ်သွားခဲ့ရတော့သည်။ ဤသည်နှင့် မရှေးမနှောင်းမှာပင်၊ အင်္ဂလိပ်အစိုးရက မြေရိုင်းဝေငှသည့် ဥပဒေများ ပြဌာန်းလိုက်သောအခါ၊ စစ်တကောင်းနယ်မှ၊ မွတ်စလင်ဘာသာဝင်များ အလုံးအရင်းနှင့် ဝင်ရောက်လာကြပြီး၊ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်းတော၊ ကျောက်တော်၊ မင်းပြား၊ မြေပုံစသည့်ဒေသတို့တွင် ရွာများတည်ထောင်နေထိုင်လာကြသည်။
ကနဦးကာလကမူ၊ ရိုးသားအေးဆေးသော ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများနှင့် မည်သည့်ပြဿနာမှ ရှိခဲ့သည်မဟုတ်ပါ။ အေးအတူပူအမျှ ရင်းနှီးချစ်ကြည်စွာ နေထိုင်ခဲ့ကြသည်သာဖြစ်ပါသည်။ သို့တစေ၊ လူမျိုးသဘာဝအရ၊ မွေးနှုန်းမတူသည့်အချက်က၊ ရေရှည်တွင် အကွာအဝေးတစ်ခု ဖြစ်တည်လာစေခဲ့သည်။
၁၈၃၂ ခုနှစ်က၊ စစ်တွေခရိုင်၏ လူဦးရေမှာ တစ်သိန်းကျော်သာရှိခဲ့ရာမှ၊ ၁၉၃၁ ခုနှစ်တွင် ၆ သိန်းကျော်ရှိလာပြီး၊ ၁၉၄၁ ခုနှစ်တွင်မူ ၇ သိန်းခွဲကျော်အထိတိုးပွားလာခဲ့သည်။ ဤသို့တိုးပွားလာသည်မှာလည်း၊ အဓိကအားဖြင့် စစ်တကောင်းသားများပင်ဖြစ်ရာ၊ ၁၉၄၂ ခုနှစ် ဘူးသီးတောင်၊ မောင်းတော၏ စစ်တကောင်းမွတ်စလင်လူဦးရေမှာ ၃ သိန်းကျော်အထိဖြစ်လာပြီး၊ မူလတိုင်းရင်းသားရခိုင်တို့မှာ၊ အနည်းစု ဖြစ်လာတော့သည်။
ဤအချိန်လောက်မှစ၍၊ အနည်းစု-အများစု တိုးမိတိုက်မိသည်များစတင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤအခြေအနေကိုပို၍ ဆိုးဝါးစေသည်မှာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပင် ဖြစ်သည်။ စစ်အစပိုင်း အင်္ဂလိပ်တပ်များအဆုတ်တွင် စစ်တွေခရိုင်အတွင်း လက်နက်ခဲယမ်းအမြောက်အများကျန်ရစ်ခဲ့ရာမှ၊ သာမန်ဝိရောဓိများမှ၊ လက်နက်ကိုင်အကြမ်းဖက် အဓိကရုဏ်းများအထိ အခြေအနေဆိုးလာလေတော့သည်။
နောက်ဆုံးရခိုင်တိုင်းရင်းသားအမြောက်အမြား၊ စစ်တကောင်းနယ်ထဲသို့၊ ဒုက္ခသည်များအဖြစ် ပြောင်းရွှေ့သွားရသည်များပင် ရှိသည်။ စစ်ကြီးအပြီး အင်္ဂလိပ်တပ်များပြန်အရောက်၊ အဆိုပါ ရခိုင်ဒုက္ခသည်များကို မူလနေရာဟောင်းသို့ပြန်လည် အခြေချပေးခဲ့သော်လည်း အာဃာတအမုန်းမီးပွားများကိုကား၊ မငြိမ်းသတ်နိုင်တော့ပါချေ။
စစ်ပြီးခေတ်အရှုပ်အထွေးများအောက်တွင်၊ ပြဿနာမှာ အကြမ်းဖက် နိုင်ငံရေးသဘောဆောင်လာပြီး၊ မူဂျာဟစ်အမည်ဖြင့် လျို့ဝှက် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
လွတ်လပ်ရေးခေတ်ဦး၊ ရန်ကုန်အစိုးရကာလ၊ ၁၉၄၉ - ၅၀ မှာဆိုလျှင် ဘူးသီးတောင်နှင့် ရသေ့တောင်တို့မှာ၊ မူဂျာဟစ်သူပုန်များလက်အောက်တွင် ကျရောက်ခဲ့ရသည်။ မူဂျာဟစ်တို့၏ ရည်မှန်းချက်မှာ၊ သီးခြားအစ္စလာမ်မစ်နိုင်ငံတည်ထောင်ရေးပင်ဖြစ်သည်။ (Hugh Tinker: The Union of Burma- page 34) ထိုသည်၏နောက်ပိုင်း ( ၁၉၅၂ - ၅၂ နှင့် ၅၄ ) မြန်မာ့တပ်မတော်၏ စစ်ဆင်ရေးများဖြင့် အဆင့်ဆင့်နှိမ်နှင်းပြီးမှသာ၊ တစ်စုံတရာတည်ငြိမ်ခြေကို ပြန်လည်ရယူနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သို့တစေ ပြဿနာကိုအပြီးအပြတ် ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သည်ကား မဟုတ်။ စစ်အေးလွန်ခေတ်၏ အခြေအနေသစ်အောက်တွင် ရိုဟင်ဂျာဆိုသော အမည်သစ်ဖြင့် ပြန်လည်လှုပ်ရှားလာပြန်သည်။ ယခုတစ်ကြိမ်ထူးခြားချက်ကား၊ ဒီမိုကရေစီချန်ပီယံဆိုသော မီဒီယာအချို့ကိုယ်တိုင်က၊ မီးလောင်ရာလေပင့်လုပ်လာကြခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
အမှန်စင်စစ်၊ ယနေ့ ရခိုင်အရေးမှာ အဆိုပါမီဒီယာ အချို့စွပ်စွဲပြောဆိုနေကြသလို၊ လူနည်းစုဘာသာဝင်များ၏ အရေးမဟုတ်။ လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားများ၏အရေး ပို၍ပင်မဟုတ်။ ကိုလိုနီအမွေဆိုးမှ အကြောင်းခံပေါ်ထွက်သော၊ အတိမ်းအစောင်းမခံသည့် ထိစပ်နယ်မြေပြဿနာပင်ဖြစ်သည်။ ဤပြဿနာကို၊ မျက်မှောက်ခေတ် နိုင်ငံတကာအခင်းအကျင်းမှ ထွက်ပေါ်လာတန်ရာသော အမှောင့်ပယောဂများနှင့်ချိတ်ဆက်စဉ်းစားလိုက်လျင်၊ နုနယ်လှသေးသော မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်သာမက၊ မြန်မာ့အချုပ်အခြာအာဏာအတွက်ပါ၊ မထိတ်သာ မလန့်သာ အကျိုးဆက်များ ခုနှစ်စဉ်အမျှင်တန်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်လေမလား စဉ်းစားစရာတွေရှိနေသည်။
အထူးသဖြင့်၊ စစ်အေးလွန် ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း၏ နိုင်ငံတကာ အကြမ်းဖက်ဝါဒ အန္တရာယ်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအန္တရာယ်မှာ လျှော့ပါးသက်သာသွားပြီ ဆိုကြသော်လည်း တကယ်တော့၊ ပစ်မှတ်ပြောင်းသွားခြင်းသာဖြစ်သည်။ ယခင်ဖွံ့ဖြိုးပြီးရှေ့တန်းရောက် နိုင်ငံကြီးများမှ၊ အားနည်းချည့်နဲ့သော ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများသို့ ချိန်ရွယ်ချက်ပြောင်းသွားခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ဤသို့ ပစ်မှတ်ရွေးချယ်ကြရာတွင်လည်း အစိုးရနှင့် လူထုကြား ယုံကြည်မှုမကောင်းလှသော၊ နိုင်ငံငယ်လေးများကို ဦးစားးပေးလေ့ရှိသည်ကို သတိချပ်ကြဖို့လိုမည်ထင်ပါသည်။
ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းခေတ်၏ နောက်ထပ်ထူးခြားဖြစ်စဉ်တစ်ရပ်မှာ ‘ ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြသည်များ ’ (migration) ရှေ့ရောက်လာခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင်လည်း၊ တစ်နိုင်ငံမှ တစ်နိုင်ငံသို့ သမားရိုးကျရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြသည်နှင့် ထိစပ်နယ်မြေအတွင်း၊ စိမ့်ဝင်ပျံ့နှံ့ကြသည်တို့မှာ၊ သဘောသဘာဝချင်းမတူကြပါချေ။ ထိစပ်နယ်မြေပြဿနာမှာ သစ္စာခံမှုထွေပြားသည်ဖြစ်၍ အန္တရာယ်လမ်းကြောင်းဟု သတ်မှတ်ကြသော်လည်း၊ သမားရိုးကျရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုများမှာ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်သဘောမျှသာဖြစ်ပါသည်။
ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြသူများဘက်မှ ၎င်းတို့ရောက်ရှိရာ နိုင်ငံအပေါ်သစ္စာခံကြသလို၊ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများဘက်မှလည်း၊ သူတို့တတွေကို နိုင်ငံသား အခွင့်အရး အဆင့်ဆင့်ပေးကြသည်သာဖြစ်ပါသည်။ သို့တိုင်အောင် community အဖြစ်သာ သဘောယူပြီး၊ nationality အဖြစ်ကား၊ မည်သည့်နိုင်ငံကမှ သဘောထားကြသည်မဟုတ်ပါ။ ယနေ့အရင့်ကျက်ဆုံး ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ အမေရိကမှာပင်၊ ဤအတိုင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာ့သမိုင်းကို ပြန်ကြည့်လိုက်လျင်၊ ပုဂံခေတ်ဦးလောက်ကပင်၊ နိုင်ငံရပ်ခြားနှင့် ကူးလူးဆက်ဆံမှုများ ရှိသလောက်ရှိခဲ့သည်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ ဗျတ်ဝိ၊ ဗျတ္တ ဇာတ်လမ်ကိုပင်ကြည့် ...။ သူတို့ ညီနောင်မှာ၊ ပင်လယ်ဖြတ်၍ရောက်လာကြသော၊ တမြေရပ်ခြားမှ၊ ဘာသာခြားတွေဖြစ်သည်။ သို့တစေ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ပုဂံသားတွေက၊ သူတို့နှစ်ယောက်ကို သူရဲကောင်း အဖြစ်ချစ်ခင်ကြသည်။ သူတို့ကွယ်လွန်သည်အထိပင်၊ သုံးဆယ့်ခုနှစ်မင်း စာရင်းသွင်းကိုးကွယ်သည်အထိ ချစ်ခဲ့ကြသည်။ ထားတော့- ဤဇာတ်လမ်းမှာ သမိုင်းမဟုတ်၊ ပုံပြင်မျှသာဟုဆိုစေဦး၊ အခြားအထောက်အထားတွေ မနည်းမနောရှိသည်။
ကုန်းဘောင်ခေတ်ကဆိုလျှင်၊ မွတ်စလင်ဘာသာဝင်တစ်ဦးကိုပင်၊ ဘုရင်ကိုယ်တိုင်က မြို့တော်ဝန်အဖြစ် မြှောက်စားဖူးသည်။ (အမရပူရမြို့တော်ဝန်ဘိုင်ဆတ်)။ ထို့ထက်၊ ယနေ့ထက်တိုင် မြန်မာလူထုမမေ့နိုင်ကြသေးသည့် ဗိုလ်ချုပ်တို့နှင့်အတူ ကျဆုံးခဲ့ရသော၊ ဆရာကြီးဦးရာဇတ်မှာ မွတ်စလင်ဘာသာဝင် သူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်သည်။ ဤတွင်ပြောလိုသည်မှာ၊ လူမျိုးဘာသာမခွဲခြားဘဲ၊ သူရဲကောင်းဆိုလျင် ချစ်ခင်မြတ်နိုးတတ်သည့်၊ မြန်မာ့ အစဉ်အလာ မြန်မာ့စိတ်ရင်း အကြောင်းဖြစ်ပါသည်။
ဤအစဉ်အလာ ဤစိတ်ရင်းကို၊ မြန်မာတွေထိန်းသိမ်းကြရပါလိမ့်မည်။ လက်တွေ့ကျကျ ပြသရပါလိမ့်မည်။ ဒီမိုကရေစီနှင့် ထိုက်တန်သောလူမျိုးဖြစ်ကြောင်း၊ ကမ္ဘာကသိစေရပါမည်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာပင်၊ ရှုပ်ထွေးပွေလီ၊ မာယာများလှသော ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေး ကျားကွက်တွင် အမျိုးသားရေးသတိမမေ့မလျှော့ရှိကြဖို့လည်း လိုမည်ထင်ပါသည်။
ဂရိတ်ပါဝါယှဉ်ပြိုင်ပွဲတွင်၊ နိုင်ငံငယ်လေးများမြေဇာပင်ဖြစ်ကြရသည့် သာဓကတွေ၊ သမိုင်း ဇာတ်ခုံထက်တွင် မမြင်ချင်အဆုံးတွေ့ခဲ့ရပြီး မဟုတ်ပါလော။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အကြိုကာလက၊ ဗြိတိသျှနန်းရင်းဝန် ချိန်ဘာလင်၏ ဟစ်တလာချော့မြူရေးပေါ်လစီအရ၊ အဲ(လ)ဆက်နှင့် လော်ရိန်းနယ် ဖက်ဆစ်ကျားစာဖြစ်ခဲ့ရသည်ကို သတိချပ်ကြရပါလိမ့်မည်။ လာတော့မည့် လွှတ်တော်အနေနှင့် အဆိုပါသတိ၊ အဆိုပါအသိဖြင့်၊ အခါလည်သား မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ပါစေသတည်း။
(၁၂. ၆. ၂၀၁၂)
၁။ ကိုလိုနီခေတ်- ဘားမားဂဇက်တီးယားစာစောင်များ
၂။ The Union of Burma (Myanmar) by Hugh Tinker
၃။ The Next 100 Years by George Friedman
( မိုးမခမှတ်ချက် - စာရေးဆရာ၊ အယ်ဒီတာ ဆရာကျော်ဝင်း၏ ဖေ့စ်ဘွတ်ကနေ ကူးယူ ဖော်ပြတာ ဖြစ်ပါတယ်)
အောင်ဒင် - နိုင်ငံတကာဖိအားများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ
မောင်စွမ်းရည် - ငါ့ဟာပြန်ပေး
ကာတွန်း ညီပုချေ - အရှုံးခံသူများ